Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): August 2011
မြန်မာပြည်တွင် ဝေဒပညာဖြင့် ထီသုတေသန လုပ်နေသူ၊ ထီ အကြံပေးနေသူ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးမှ ထီပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေမျှ ပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းခံ လာခဲ့သဖြင့်- သူနှင့် တကွ အခြားခြားသော ထီသုတေသီ များအတွက်- တိကျသော လမ်းညွှန်မှု ရစေရန် ဤဆောင်းပါး ကို ရေးပေး ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထီသုတေသန လုပ်သူဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့် သုတေသန လုပ်သူ ဖြစ်ဖြစ်- အားပေး ပါသည်။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လည်း ကူညီနိုင်သည့် ဘက်မှ ကူညီပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အားကိုးတစ်ကြီး ဗေဒင် လာမေးသူအား ထီအကြောင်းပြု၍- ထီပေါက်ကိန်း ရှိသည်။ သူ့ထံတွင် ထီထိုးပါ။ ထီလက်မှတ်ကို သိဒ္ဓိတင်ပေးထား မည် ဖြစ်၍- ယခု ပြန်မပေးလိုက် နိုင်ပါ ဟု ဆို၍ ထီလက်မှတ် ယူထားပြီးနောက်တွင် - ထီလက်မှတ်ဘိုးတွင် တစ်ခါ၊ ထီပေါက်လျှင် တစ်ခါ၊ ကော်မရှင်စား ပြီးနောက်- သိန်းရာနှင့် ချီ၍ ထီပေါက်သော အခါ ထွက်ပြေးသွားသော ထီပညာရှင် အမည်ခံ - ဗေဒင် လောကကို အိုးမည်း သုတ်သူ တို့ လုပ်ခဲ့သော လမ်းကြောင်းကို လျှောက်ခြင်းကိုကား- လုံးဝ အားမပေးပါ။ ကျွန်တော်သာ တင် မက- ဗေဒင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင် အားလုံးတို့ သည်လည်း ဤသူမျိုးကို ကဲ့ရဲ့ ရှုံ့ချမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့်- တစ်လှေလုံး ပုပ်ခြင်း ဖြစ်၏။
တစ်ဆက်တည်းတွင်- ထီထိုးချင်သူ ကိုယ်တိုင် မိမိ ဇာတာကို ကြည့်၍- ထီပေါက်နိုင် မပေါက်နိုင် ကိုယ်တိုင် သုံးသပ်နိုင်မည် ဆိုလျှင်- ထိုအလိမ် စက်ကွင်း မှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု ယူဆ၍လည်း ဤဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့် အနေဖြင့် ထီသုတေသန ပြုခဲ့သော- အောက်ပါ ဆောင်းပါးတို့ကိုလည်း ယခင်က ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
ထီထိုးချင် သပဆိုယင်..(၂၀၁၁ နှစ်သစ် လက်ဆောင်) http://www.motaa.info/2010/12/blog-post_27.html
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅-သန်းတန် ထီဆုရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ ဇာတာအား MOTAA နည်းစံနစ်ဖြင့် ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း။ http://www.motaa.info/2009/11/lottery-winners-chart.html
မမှန်ယင် လျှာလှီးခံမယ့် ထီတွက်နည်း။ http://www.motaa.info/2010/10/blog-post.html
ထီနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်ထားသင့်သော အချက်များ။
မည်သည့် ဖြစ်ရပ် - ကောင်းသည့် ဖြစ်ရပ် ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည့် ဖြစ်စေ- ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အားလုံးသည် မူလ ဇာတာတွင် မပါရှိပဲ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်း မရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- ဇာတာရှင်၏ အတိတ်ဘ၀ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ အကြောင်းတရား ကြောင့်- ကောင်းကင်ရှိ ဂြိုဟ်တာရာ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှုတို့ က - ဇာတာရှင်၏ မွေးဖွားချိန်တွင် လွှမ်းမိုး ထားပြီးနောက်- မည်သည့် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိသည်ကို မူလ ဇာတာတွင် သတ်မှတ် ပုံဖေါ် ပေးလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။
သုတေသန ဆန်းစစ် နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုသည့်- မိုးတား ကိုယ်ပိုင်နည်းသည် ရှေးကျမ်းရင်းတို့မှ နောက်ခံ အနှစ်သာရ ကို အခြေခံ၍ ဇာတာပေါင်း များစွာအား သုတေသန တွေ့ရှိချက်များမှ ဖေါ်ထုတ်ထားခြင်းကြောင့်- သမားရိုးကျ ထီပေါက်ကိန်း ဟောကိန်း များစွာနှင့် ခြားနားပါသည်။
ထီအကြောင်း ရေးသားကြသည့် များစွာသော ထီစာအုပ်များ၊ ထီဆောင်းပါးများတွင် - ချမ်းသာခြင်း နှင့် ထီပေါက်ခြင်းကို ရောပြွမ်း ရေးသားထား ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အထူးသဖြင့် ထီပေါက်ခြင်းကို စစ်ဆေးကြရာတွင်- ကြာသပတေး ဂြိုဟ်၊ နှင့် ၂-တန့်ဘာဝ တို့ကို စစ်ဆေး ကြသည်က များပါ၏။
ပညာရှင် တစ်ဦးအနေဖြင့်- ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ချမ်းသာခြင်းကို ကိုယ်တိုင် ခွဲခြားသုံးသပ် နိုင်ခြင်း မရှိပါက - နက္ခတ္တဗေဒ ပညာကို မသိသူ အများစု အနေဖြင့်မူ သိလာနိုင်စရာ မရှိပါတော့ပေ။
ကြွယ်ဝ ချမ်းသာခြင်းကို အုပ်စုခွဲ လေ့လာမည် ဆိုလျှင်ပင်-
ငယ်စဉ်က ချမ်းသာ ပြည့်စုံမှု မရှိခဲ့ပဲ- နောင်မှ မိမိ ကိုယ်တိုင် ရိုးသားစွာ ကြိုးစား ၍ အောင်မြင် ချမ်းသာခြင်းမျိုး၊
ငယ်စဉ်က ချမ်းသာ ပြည့်စုံမှု မရှိခဲ့ပဲ- နောင်မှ မိမိ ကိုယ်တိုင် မမှန်မကန်သော ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် ကြိုးစား ၍ အောင်မြင် ချမ်းသာခြင်းမျိုး၊
ငယ်စဉ်ကလည်း ချမ်းသာ ပြည့်စုံသလို- မိမိကိုယ်တိုင် ဥစ္စာ စီးပွားရှာရာတွင်လည်း အရည်အချင်း ဖြင့် မူလ အနေအထားထက် မြင့်မားသော ချမ်းသာခြင်းမျိုး။
ငယ်စဉ်ကလည်း ချမ်းသာ ပြည့်စုံသလို- ကြီးပြင်းလာရသည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားသော သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် သိက္ခာ ရှိစွာ၊ အဆင့်အတန်း မြင့်စွာဖြင့်- ပြည့်စုံ ချမ်းသာ ကြသူမျိုး။
ငယ်စဉ်က ချမ်းသာ ပြည့်စုံ သော်လည်း မိမိ၏ အရည်အချင်း မပြည်စုံမှုကြောင့် မူလ အဆင့်မှ ကျဆင်းသွားရသော ဇာတာမျိုး။
ငယ်စဉ်က ချမ်းသာ ပြည့်စုံ သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီးတတ်ခြင်းကြောင့် မူလ အဆင့်မှ ကျဆင်းသွားရသော ဇာတာမျိုး။
မိမိပေါက်သော ထီဆုငွေကို အခြေပြု၍ - ထိုမှ တစ်ဆင့် ချမ်းသာအောင် ဖန်တီးနိုင်သူမျိုး (အလွန့်အလွန် ရှားပါးသည်)
မိမိပေါက်သော ထီဆုငွေကို အခြေပြု၍ - ထိုအဆင့်အတန်း အနေအထားကိုပင် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း နိုင်သူမျိုး (ရှားပါးသည်)
မိမိပေါက်သော ထီဆုငွေကို အခြေပြု၍ - လက်ရှိ အခက်အခဲ ကို ယာယီဖြေရှင်း၊ တစ်သက်လုံး မကိုင်နိုင်သော ငွေကို ဟိုဟို ဒီဒီ ပတ်ရမ်း ခြင်းဖြင့် အချိန် ၅-နှစ်မှ ၁၀-နှစ် အတွင်း ငွေကြေးအားဖြင့်- ဒုံရင်းသို့ ပြန်ရောက်သွားသူများ (ထီဆုကြီး ပေါက်သူတို့၏ အများဆုံး အနေအထား ဖြစ်၍ ၇၀% မျှ ရှိပါ၏။)
မိမိပေါက်သော ထီဆုငွေကို အခြေပြု၍ - လက်ရှိ အခက်အခဲ ကို ယာယီဖြေရှင်း၊ မသုံးသင့်သော နေရာများတွင် သုံးစွဲ၊ ဖြုန်းတီး၍ သော်လည်းကောင်း၊ မကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ၊ အလိမ်ခံရ - စိတ်ရော လူပါ ထောင်းထောင်းကြေ၊ ပြီးနောက် ၁၀-နှစ် အတွင်းပင်လျှင် လူ့လောက မှ ထွက်သွားကြသူများ၊ သို့မဟုတ် များစွာ အတိဒုက္ခရောက် သွားကြသူများ။ (အထက်ပါ အုပ်စု တွင်ပါဝင်သော မျိုးကွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါ၏။)
အမှန်အားဖြင့် ထီပေါက်သူနှင့် ချမ်းသာသူတို့မှာ ကွာခြားချက် များစွာ ရှိပါ၏။
ချမ်းသာသူ- တို့တွင် ငွေတစ်ခုတည်း ရှိခြင်းမဟုတ်၊ ငွေနှင့် တကွ- လုပ်ငန်း အကြောင်း ကျွမ်းကျင်မှု၊ အလုပ်သမား စီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်မှု၊ စီးပွားဘက် မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ အဆက်အသွယ် လမ်းကြောင်း တို့ရှိကြ၏။ အချို့တွင်မူ- တန်ဘိုးဖြတ် မရသော နာမည်ကောင်း ပါ ရရှိထားကြ၏။
ထီပေါက်သူ အများစုသည် ငွေရှိလာသော အခါ မိမိကိုယ်မိမိ ချမ်းသာသွားပြီ၊ ဘ၀ပြောင်းသွားပြီဟု ထင်မိတတ်၏။ လက်ရှိ မိမိကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်းတွင် (ယခင် အရင်း အနှီး မရှိခင်က မိမိလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းတွင်) ချဲ့ထွင် လုပ်မည် ဆိုပါစို့- ယခင်က ထိုလုပ်ငန်း - လုပ်ပုံ လုပ်နည်း သိသော်မှ - ငွေကြေး နှင့် စီမံ အုပ်ချုပ်တွင် မကျွမ်းကျင်လျှင်- ပြဿနာတို့ တက်လာမည် ဖြစ်၏။ မိမိတွင် ငွေအချောင်ရခြင်းကို အကြောင်းပြု၍- ချဉ်းကပ်လာသူ ဟိုဘက် ဒီဘက် အမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများ တို့တွင်လည်း- ထိုသူတို့၏ မိမိအပေါ် ထားသည့် သဘောထား၊ ရိုးသားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် အရည်အချင်း၊ တို့ကို - အမှန်အကန် အတိုင်း ဝေဘန် ဆန်းစစ် လက်တွဲ လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် မှာလည်း သိပ်မလွယ်သော ကိစ္စ ဖြစ်၏။ အဆက်အသွယ် လမ်းကြောင်းတို့တွင်လည်း- လုပ်ငန်းရှင် စစ်စစ်များနှင့် ယှဉ်၍ မရ။ မိမိတွင် ယခင်က ကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်း မရှိထားပဲ- အခြားသူ၏ လုပ်ငန်းတွင် စပ်တူလုပ်ခြင်း၊ ယခုမှ လုပ်ငန်းသစ် တစ်ခုကို စတင်ခြင်း လုပ်မည် ဆိုသော် ပို၍ ဆိုးသော စိမ်ခေါ်မှု အနေအထားများကို ကြုံတွေ့ရမည် ဖြစ်၏
အဆိုးဆုံး အချက်တစ်ခုမှာကား- လူသည် လောကဓံ ၏ သားကောင် ဖြစ်၏။ ရုတ်တစ်ရက် ငွေကြေး အနေအထား ထင်ရှားစွာ ပြောင်းသွားသူအား- လောက ဓမ္မ ခေါ် လောကဓံ ၊ လောကတရား၏ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို ခံရခြင်း ဖြစ်၏။ လာဘ်ရမှု၊ အခြံအရံရှိမှု၊ ချီးမွမ်းမှု၊၊ ချမ်းသာမှု၊ စသော- အကောင်းဟု သတ်မှတ် ထားကြသည့် လောကဓံ သည် တစ်ပြိုင်တည်း ရိုက်ခတ် ထားချိန်တွင် အမှန်ကို အမှန် မမြင်နိုင်ကြတော့။ “ငါတော်၏၊ ငါတတ်၏၊ ငါမှန်၏။ ငါလုပ်နိုင်၏” ဟူသော အနေအထားတို့ ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်- မိမိအား လိမ်လည်သူလား၊ နောက်ကျော ဓားနှင့် ထိုးမည့်သူလား၊ မိတ်ဆွေစစ်လား မခွဲခြား နိုင်တော့- ထိုအခြေအနေ တို့သည်- မကြာခင်ကျရောက်တော့မည့် အနှုတ်ဓါတ် လောကဓံ တရားတို့ကို ဖိတ်ခေါ်တော့မည် ဖြစ်၏။ အမှန်အားဖြင့် ထီပေါက်သူတို့မှသာ မဟုတ်- အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းတို့ကြောင့်- ဆင်းရဲတွင်းမှ- ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်း၊ သြဇာ အာဏာရရှိခြင်း တို့တွင် ကြုံလာရတတ်သော လောကဓံ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဖုဋ္ဌဿ၊ လောက ဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံယဿ၊ နကမ္ပတိ၊ အသောကံ၊ ၀ိရဇံ၊ ခေမံ။ ဟု မြတ်စွာဘုရားမှ မင်္ဂလသုတ် တွင် သတိပေး သင်ကြားပေးခဲ့ပါ၏။
ခက်သည်က- ဇာတာရှင် ကိုယ်တိုင်က ထိုအခြေအနေကို သတိထား ဆင်ခြင် နိုင်သော်မှ- အခြေအနေ အမှန်ကို မမြင်နိုင်တတ်သည့်- မိသားစုဝင်များ၊ အတွင်းစည်းဝင် များကို ထိမ်းသိမ်းရန် ခက်တတ်ခြင်း ဖြစ်၏။
အားလုံး ကုန်သွားသော်- နောင်တရကြသော အချိန်ပင် ဖြစ်ပါတော့၏။ သို့သော်လည်း နောက်ကျသွားပြီ ဖြစ်သည်။
သတိပေးသင့်သည်များကို ယခု ဆောင်းပါးတွင် မက- ယခင် ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါးတို့တွင်လည်း သတိပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။ ပညာရှင်များ လေ့လာ နိုင်ရန် အတွက်လည်း- “ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးများနှင့် ထီဆုကြီး ပေါက်သူများ၏ ဘ၀ ဖြစ်စဉ်နှင့် နက္ခတ္တအမြင်” စာအုပ်ကို ရေးသား ထုတ်ဝေ ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသော်လည်း- အခြေအနေ အခက်အခဲများကြောင့် နောက်ကျနေခဲ့ခြင်းကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါသည်။ မကြာခင် ထွက်ဝေ ဖြစ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ထီပေါက်ခြင်း တို့ကို လေ့လာရာတွင် မိုးတား မှ တွေ့ရှိထားချက်မှာ-
အင်အား မထုတ်ရပဲ အချောင် ရခြင်းမျိုးကို ဖြစ်စေသည့် ၈-တန့်ဘာဝ၊ ၈-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၈-တန့်ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို ပထမဦးစွာ လေ့လာ ရပါသည်။ (မှတ်ချက်- မြန်မာ တို.အနေဖြင့် မရဏ ဘာဝ ဟု အသိများသော ဒုဌာန ဘာဝ ဖြစ်သည့် ၈-တန့်သည် ထီပေါက်ခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် ဘ၀ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်း၊ သံသရာ မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း နှင့် ဂမ္ဘီရ ပညာများ အတွက် အရေး အကြီးဆုံး ဘာဝ ဖြစ်သည်။)
ကံကောင်းခြင်း၊ သက်တောင့် သက်သာ ရရှိခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန့်ဘာဝ၊ ၉-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၉-တန့် ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို ထပ်မံ လေ့လာ ရပြန် ပါသည်။
ပုတ္တရဘာဝ ဟု မြန်မာ ပညာရှင် များ သိထားကြသော ၅-တန့် ဘာဝသည် ဇာတာရှင်၏ ပညာရေး၊ သားသမီးရေးတို.ကိုသာ ဖော်ဆောင် နေသည်မျှ မက- လောင်းကစား တွင် အနိုင်ရရှိခြင်း၊ စတော့ခ် ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ်မှ အမြတ်အစွန်း ရရှိခြင်း၊ ထီပေါက် ခြင်း တို.ကိုပါ ထောက်ပံ့ ပေးထား သဖြင့် ၅-တန့်ဘာဝ၊ ၅-တန့် ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၅-တန့် ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို လေ့လာ ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို.နောက်တွင် တော့ မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်တို.ကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟု အား လေ့လာရပါသည်။ အဆိုး များ၊ အနှောက်အယှက် များကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ရာဟုသည် မူလဇာတာ တွင် တည်နေသော ရာသီ၊ ဘာဝ အိမ်၊ ယှဉ်နေ သော နက္ခတ်၊ စီးထားသော န၀င်း တို.ကို မူတည်၍ ဆိုးကျိုးများ ပေးနိုင် သကဲ့သို.၊ အချို.သူများ အတွက် ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုတို.ကို လည်း ဖြစ်ပေါ် စေ တတ်သည်။
ထီပေါက်သူ၏ မူလ ဇာတာ လေ့လာချက်။
ယခု ထီပေါက်သူ မြန်မာ လူမျိုးတစ်ဦး၏ အမည်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖေါ်ထုတ်ရန် ဇာတာရှင်မှ အခွင့်မပြုသဖြင့်- မည်သူ မည်ဝါ ဆိုသည်ကို လုံခြုံမှု ရှိစေရန် အတွက်- ဇာတာရှင်၏ မွေးနေ့ နေ့စွဲနှင့် တကွ- ထီပေါက်သော ပမာဏကို ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ဇာတာရှင်သည် ဗြိစ္ဆာလဂ်၊ မိဿစန်း ဖြစ်၏။ လဂ်သည် ဇေဌ နက္ခတ်၊ စန်းသည် အာသာဝဏီ နက္ခတ် နှင့် ယှဉ်၏။
မိုးတား နက္ခတ် နည်းစနစ် ဖြင့် ဆန်းစစ်လိုက်သော် မူလဇာတာတွင် အောက်ပါ အနေအထားများကို တွေ့လာရတော့၏။
(၁) ၉-တန့်ဘာဝ သခင် တနင်္လာသည် ၅-တန့်ဘာဝ တွင်တည်၏။ ရာသီအားဖြင့် မိဿ ရာသိ ဖြစ်၏။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ၉-တန့်ဘာဝသည် ကံကောင်းခြင်း၊ သက်တောင့် သက်သာ ရရှိခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ဘာဝလည်း ဖြစ်၏။ ပုတ္တရဘာဝ ခေါ် ၅-တန့် ဘာဝသည် လောင်းကစား တွင် အနိုင်ရရှိခြင်း၊ စတော့ခ် ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ်မှ အမြတ်အစွန်း ရရှိခြင်း၊ ထီပေါက် ခြင်း တို့ကို ဖေါ်ပြသော ဘာဝ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ၉-တန့်ဘာဝ သခင် ၅-တန့်ဘာဝ တွင်တည်ခြင်းသည် လောင်းကစား၊ ထီနှင့် ပါတ်သက်၍ ကံကောင်းခြင်းကို ဖေါ်ညွှန်းနေတော့၏။
(၂) မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်တို.ကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟုသည် ကံကောင်းခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန့်ဘာဝတွင် တည်၏။ ဤအချက်သည် မထင်မှတ်ပဲ ရုတ်တစ်ရက် ကံကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော အနေအထားဖြစ်၏။
(၃) သမားရိုးကျ နည်းများ ဖြစ်ကြသော ကြာသပတေးကို ကြည့်ပါက- ကြာသပတေးသည် နိစ်ရာသီ တွင်တည်နေသည်ကို ကြည့်၍ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ကြ ပါမည်နည်း။
(၄) ထီပေါက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများက ဒါတင်ပဲလား၊ မဟုတ်သေးပါ။ ၉-တန့်ဘာဝ သခင် တနင်္လာအား မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်တို.ကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟုမှ ၆၃% ဖြင့် ၉-တန့် အမြင်ပြုထား၏။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ရုတ်တစ်ရက် ကံကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော အချက်ကို ထပ်မံ အထောက် အပံ့ပြုနေသော အချက်ဖြစ်၏။
(၅) လာဘ် လာဘကို တာဝန်ယူသော ၁၁-တန့် ဘာဝ သခင် ဗုဒ္ဓဟူးသည် မတော်တစ်ဆ ဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်သော ၆-တန့်ဘာဝ၏ အလယ်မှတ် တည့်တည့်ကို အမြင် အတိအကျဖြင့် ၁၀၀% လွှမ်းမိုးထားလိုက်၏။ မည်သည်ကို အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နေပါသနည်း။ မတော်တစ်ဆ ပုံဆန်ဆန်ဖြင့် လာဘ်လာဘ ရရှိခြင်း မဟုတ်ပါ သလော။ ဤအကြောင်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅-သန်းတန် ထီဆုရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ ဇာတာအား MOTAA နည်းစံနစ်ဖြင့် ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း။ http://www.motaa.info/2009/11/lottery-winners-chart.html ဆောင်းပါးတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။
(၆) မူလ ဇာတာ၏ န၀င်းစက် အနေအထားအရတွင် စနေသည် ၅-တန့်၊ ၉-တန့် တို့အား အတိအကျ ၁၀၀% ဖြင့် လွှမ်းထားသော အနေအထားတွင် ရှိနေ၏။
(၇) မူလ ဇာတာ၏ န၀င်းစက် အနေအထားအရတွင် ကြာသပတေးသည် လည်း ၅-တန့်၊ ၉-တန့် တို့အား အတိအကျနီးပါး ၉၈% ဖြင့် လွှမ်းထားသော အနေအထားတွင် ရှိနေ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ- ကောဇာ စနေနှင့် ကြာသပတေးတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ထင်ရှားသော ကာလတွင် ၅-တန့်၊ ၉-တန့် တို့၏ အနေအထား တို့သည် သက်ဝင် လှုပ်ရှား လာမည် ဖြစ်ခြင်းပင်တည်း။
ဒဿာ နှင့် ကောဇာ ဆန်းစစ်ချက် (လတ်တလော အကြောင်းရင်း)။
မူလဇာတာတွင် ပါခဲ့သော အခြေအနေ တို့သည်- ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ်တို့ ဖြစ်ပေါ်ရန် အတွက် လိုအပ်သော အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို စောင့်စားနေခြင်း ဖြစ်၏။ ဆိုလိုသည်မှာ- လောင်စာနှင့် တူသော အခြေခံ အကြောင်းတရားတို့ ပြည့်စုံ နေလျှင်- လတ်တလော အကြောင်းတရား ဆိုသော မီးပွင့် ကို စောင့်စား နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဒဿာ ကာလ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်ပေါ်ရန် ပံ့ပိုးသည့် ကောဇာ အခြေအနေတို့သို့ ရောက်လာသော အခါတွင် မူလ ဇာတာတွင် ရေးဆွဲထားခဲ့သော ကောက်ကြောင်းတို့သည် တိကျသော ပုံပန်း သဏ္ဍာန်၊ ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခု အဖြစ်သို့ ရောက်သွား ပါတော့၏။
ရာဟု ထူလ၊ ရာဟု အန္တရ၊ ကိတ် ပြတန္တရ သည် အမှန်အားဖြင့် မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်ရမည့် ကြောက်စရာ ကောင်းသော ကာလ တစ်ခု ဖြစ်၏။ ရာဟုသည် မူလ ဇာတာတွင် ၉-တန့်တွင် တည်သော ဂြိုဟ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်စပ်မှု အနေအထားများကို အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားခဲ့သည် ကို အမှတ်ရစေလိုပါသည်။
မှတ်သားရန် အချက် အနေဖြင့်- မည်သည့် ပညာရှိကမျှ ရာဟု ဒဿာတွင် ကောင်းသည်ဟု မပြောပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ထီပေါက်သည့် ကိစ္စသည့် သူတော်ကောင်း ပညာရှိများ အနေဖြင့် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သော ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းကို ရှေးပညာရှင်များက မထောက်ခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လှည့်လည် ဖျားယောင်းခြင်း၊ အမှန်တရားကို ၀ှက်ကွယ်ခြင်း၊ တို့ကို ကိုယ်စားပြုသော ရာဟုသည် အချို့သော သူများအတွက် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု ပေးကြောင်း၊ ထင်မှတ်မထားသည့် ရုတ်တစ်ရက် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်စေကြောင်းကို မိုးတားမှ သုံးသပ် တွေ့ရှိသော်လည်း- ကောင်းမကောင်း ဆိုသည့် ကိစ္စတွင်မူ- ရှေးပညာရှင်များ၏ အယူအဆကို ငြင်းဆိုဘွယ် မရှိဟု မြင်ပါသည်။ အများစုသည် ထီပေါက်ခြင်းကို ကံကောင်းခြင်းဟု မြင်တတ် နေကြခြင်းကို မိုးတားမှ မထောက်ခံပါ။
အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်က ထီပေါက်သော နေ့၏ ကောဇာ ဇာတာခွင် ဖြစ်ပါသည်။ တနင်္လာ၏ တည်နေရာ အနေဖြင့် အနည်းငယ် ကွာဟမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုနေ့တွင်- ကောဇာ ဂြိုဟ်များမှ မူလ ဇာတာရှိ ဘွားဂြိုဟ်များ၊ ဘာဝ များကို လွှမ်းမိုးထားပုံကို ကြည့်ပါလျှင်-
ဗြိစ္ဆာ ရာသီ 28:24 တွင်တည်သော ကောဇာ ရာဟုသည်- ကရကဋ်:28:58 တွင်တည်သော မူလဘွား ရာဟုအား ၉-တန့် အမြင်ဖြင့် ၉၉% ဖြင့် အတိအကျ နီးပါး အမြင်ပြုထား၏။ ဤသည်မှာ မထင်မှတ်မှုများ ဖြစ်တတ်သော ကိစ္စများတွင် ဖြစ်လေ့ ရှိသော အခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ဤနေ့ -မွန်းတည့်ချိန် တွင် ကောဇာ တနင်္လာ (တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော် မူလ ဇာတာတွင် ၅-တန့်ဘာဝတွင် ရပ်တည်သော ၉-တန့်သခင် တနင်္လာ) သည် ဇာတာရှင်၏ ၄-တန့်နှင့် ၁၀-တန့်တို့အား ၉၈% ဖြင့် လွှမ်းမိုးထား၏။
ထူးခြားသည်က ကောဇာ စနေ ဖြစ်၏။ မူလ ဇာတာအားဖြင့် စနေသည် ၂-တန့် ဘာဝတွင် တည်သော ၄-တန့် သခင် ဂြိုဟ်ဖြစ်၏။ သူ၏ စရိုက် သဘာဝတွင် ၂-တန့် နှင့် ၄-တန့် သဘာဝတို့ လွှမ်းမိုးနေ၏။ ဆက်လက်၍ လေ့လာပါကလည်း - မူလ ဇာတာ၏ န၀င်းစက် အနေအထားအရတွင် စနေ နှင့် ကြာသပတေး တို့သည် ၅-တန့်၊ ၉-တန့် တို့အားလွှမ်းထားသော အနေအထားတွင် ရှိနေကြောင်းကို ဖေါ်ပြခဲ့သည် ဖြစ်၏။
ယခု ကြည့်လိုက်ပါက- ကောဇာစက်တွင် ကြာသပတေး နှင့် စနေတို့၏ အခန်း ကဏ္ဍသည် နေရာယူ ထင်ရှားလာပြီ ဖြစ်၏။
အထူးသဖြင့်- အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော မူလဇာတာ န၀င်းတွင် ၅-တန့်၊ ၉-တန့်အား အတိအကျ လွှမ်းမိုးထားသော စနေသည် - ကောဇာ အနေအထား အရ- ပုတ္တရ ဘာဝ ၅-တန့်၊ (လောင်းကစားခြင်း၊ ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော ဘာဝ) အား ၉၇% ဖြင့် ထင်ရှားစွာ လာရောက် လွှမ်းနေပြီ ဖြစ်၏။ ရုတ်တစ်ရက် အချောင်ရသော ငွေကြေးကို ဖြစ်စေသော ၈-တန့်ဘာဝ အားလည်း ကောဇာ စနေသည် ၉၇% ဖြင့်ပင် လာရောက် လွှမ်းနေပြီ ဖြစ်ပြန်၏
ထပ်မံ၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်က ကောဇာ န၀င်း အနေအထားသည်- မူလ ဘာဝများအား လွှမ်းမိုးနေပုံ ဖြစ်၏။
မူလ ဇာတာ ၅-တန့် (ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော ဘာဝ) အလယ်မှတ်အား- ကောဇာ န၀င်းစက် အရ- ၉-တန့်သခင် (ရုတ်တစ်ရက် ငွေရခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သော) တနင်္လာမှ လည်းကောင်း၊ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော စနေမှ လည်းကောင်း၊ ရာဟု (မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသော ဂြိုဟ်) မှ လည်းကောင်း တစ်ပြိုင်တည်း လွှမ်းမိုး နေခြင်း ဖြစ်တော့သည်။
ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့- မကသေးပါ။ မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များ၊ ရုပ်ဝတ္ထု ပိုင်ဆိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးသော ကောဇာ ရာဟုသည် န၀င်းစက် တွင် ၁-တန့် (ဇာတာရှင်၏ ကိုယ်ကာယ)၊ ၅-တန့် (ထီပေါက်ခြင်း) ၊ ၉-တန့် (ရုတ်တစ်ရက် ငွေရခြင်း) ၊ ၁၁-တန့် (လာဘ် လာဘ) များကို ၇၁% ဖြင့် လွှမ်းမိုး လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတော့၏။
နက္ခတ် ပညာသည် အသေးစိတ်၏။ နက်နဲ၏။ တွက်ချက်ရ၏။ ထိုးထွင်း သိမြင်ရ၏။
တစ်ခုကောင်း၊ တစ်ချက်ကောင်းမျှ ဖြင့် မည်သည့် အချက်မျှ မဖြစ်တတ်၊ အခြေအနေ အကြောင်းတရားများ ပေါင်းစုံမှသာ ဖြစ်ရပ်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ဤဇာတာက သင်ခန်းစာ ပေးလိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူ အပေါင်း ထီထိုးမည် ဆိုလျှင်- ဆင်ခြင် တရားကို လက်ကိုင်ထား ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ အောင်မြင်မှု ဆုလဒ် ကို ရေရှည် ထိန်းသိမ်း နိုင်သူ၊ တိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်သူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
Labels: Astrology, Lottery, Myanmar Baydin
သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း နှင့် Swiss Ephemeris တို့အား လေ့လာခြင်း (၁)။
သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း နှင့် အာကာသ နက္ခတ္တ သဘော။
လက်ရိုးဗေဒင် ပညာ ဟုပဲခေါ်ခေါ်၊ နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာပဲ ခေါ်ခေါ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် တွင် သိထားကြသည့် - ဇာတာ ဆန်းစစ်သည့် ပညာရပ်တွင် ဇာတာခွင် တစ်ခုကို ရေးဆွဲ ကြမည် ဆိုပါက- ဂြိုဟ်တို့၏ တည်နေရာကို တွက်ချက် ကြရပါသည်။ ၄င်းသည် Astronomy ခေါ် အဆင့်အမြင့်ဆုံး သိပ္ပံပညာ တွက်ချက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဆန်း ပညာရပ် အနေဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဂြိုဟ်များ၏ အမှန်တကယ် တည်ရှိပုံကို တိုက်ရိုက် သုံးစွဲ ခြင်း မပြု သော်လည်း- လက်ရိုး နက္ခတ် ပညာမှာမူ ကောင်းကင် မှ ဂြိုဟ်များ၏ တည်နေရာ အမှန်ကို တိကျနိုင် သလောက် တိကျစွာ တွက်ချက်ကြရပါသည်။
ရှေးယခင်က သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း ဖေါ်မြူလာများဖြင့် တွက်ချက်ခဲ့ကြသောလည်း- ယခု နောက်ပိုင်း လွန်စွာတိကျသော Swiss Ephemeris နည်းဖြင့် NASA မှ အသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာ နည်း ဖြင့်တွက်ချက် လာကြပါသည်။
ဗေဒင် ကို လေ့လာနေကြသူများ၊ ဗေဒင် ကို မလေ့လာသော်လည်း အာကာသ ကောင်းကင် အကြောင်း သိလိုသူများ အတွက် ထိုနည်း များအကြောင်းကို ဗဟုသုတ အနေဖြင့် သိရှိစေရန် ရေးသားဖေါ်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဤဆောင်းပါးတွင် ကိန်းဂဏန်း များ၊ ဖေါ်မြူလာများ၊ တွက်ချက်ခြင်းများ ကို မလွှဲမရှောင်သာပဲ ထည့်ထားရသဖြင့် သင်္ချာ စိတ်မ၀င်စားသူများ၊ ကိန်းဂဏန်း များဖြင့် ဝေးဝေး နေသူများ အတွက် သဘောပေါက် ရန် အခက်အခဲ ရှိမည်ကို နားလည် သော်လည်း- ဤအချက်များသည် နက္ခတ် ပညာကို လေ့လာသူများ အတွက် သာမက- ပြက္ခဒိန် အကြောင်းကို နားလည် လိုသူများ အတွက်- မသိမဖြစ်- သိထားသင့်သော အခြေခံ အချက်များ ဖြစ်သောကြောင့် ရှောင်လွှဲမရ- တင်ပြ ရေးသား ရခြင်း ဖြစ်သည်ကို ခွင့်လွှတ် ပေးကြ စေလိုပါသည်။ စကားချပ်)
ထို့ကြောင့်လည်း- မြန်မာ ဇာတာခွင်များ တွက်ချက်ခဲ့ရာတွင်- လက်ရိုး တွက်နည်းဟု ရှေးယခင်က အသိများခဲ့သော- သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း မှ တွက်နည်း ဖေါ်မြူလာ များကို မူတည်၍- လူတစ်ယောက်၏ ဇာတာခွင်အား ရေးဖွဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း စသည်များ ပြုကြသည်သာ မက- နေကြတ်၊ လကြတ် တွက်ခြင်း၊ မြန်မာ ပြက္ခဒိန် တွက်ချက်ခြင်း၊ မဟာသင်္ကြန် တွက်ချက်ခြင်းများကို ပြုလုပ် တွက်ချက် ကြရပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်မူ- တွက်ချက်မှု ပို၍လွယ်ကူစေရန် အတွက် လက်ရိုး တွက်နည်းကို တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် ဆရာကြီးများက အပင်ပန်းခံ တွက်ချက် ထားသော သံဒိဋ္ဌ ဂြိုဟ်သွား ပြက္ခဒိန် များကို အသုံးပြု၍ ဇယားများမှ - အဆင်သင့် လွယ်ကူစွာ ဖတ်နိုင်ခြင်းဖြင့်- သက်သာ လွယ်ကူရန် ဆောင်ရွက် လာကြရပါသည်။ သို့သော်လည်း - စာစီ ပုံနှိပ်ရာတွင်- အခန့် မသင့် တတ်သောကြောင့်- တစ်ခါ တစ်ရံ တွင်- ဇယားများတွင် Row အတန်းလိုက် Column အတိုင် လိုက်- ရွေ့နေတတ် သဖြင့်- သတိထားမိသော- ဗေဒင်ပညာ ရှင်များ အနေဖြင့် မိမိ သုံးနေကြ သံဒိဋ္ဌ ဂြိုဟ်သွား ပြက္ခဒိန်တွင် မြှားထိုး၍ လည်းကောင်း၊ အရောင်ဖြင့် ပြ၍ လည်းကောင်း သတိပြု မိစေရန် ပြုလုပ်ထား ကြရသည်ကိုလည်း ကြုံခဲ့ဘူး ပါသည်။
ကွန်ပျူတာ ခေတ်သို့ ရောက်လာသော အခါ ကွန်ပျူတာဖြင့် ဇာတာဖွဲ့ခြင်းကို လုပ်ဆောင် လာကြပါ၏။
ထိုအခါ- ယခင်က သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း ကို အသုံးပြုသော တွက်နည်း အချို့နှင့် ခေတ်မီ ပရိုဂရမ်သုံး တွက်နည်းတို့တွင် အနည်းငယ် ကွာခြားမှုများ ရှိလာပါသည်။ မူလ သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း အတိုင်း တိကျစွာ တွက်ယူပါမူ- ကွာခြားမှု များစွာ မရှိပါသော်လည်း- လက်ဖြင့် စက္ကူပေါ်တွင် ချတွက်၊ ထပ်ပေါင်း ထပ်မြှောက်လုပ်သော အခါ- အဖြေတို့သည် ဒဿမ ပိုင်း တန်ဘိုးများ ပို၍ ပို၍ ကွာလာပါတော့သည်။
ဥပမာဖြင့် ရှင်းအောင် ဆိုပါမည်။ ၁၀ အား တည်၍ ၃ ဖြင့် စားကြည့်ပါ။ အဖြေသည် မပြတ်သော တန်ဘိုး (အဆုံးမရှိသော တန်ဘိုး ဖြစ်သည့်) ၃.၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃……ဆိုသော တန်ဘိုးရပါ၏။ လက်ဖြင့် တွက်ကြရသည့် အခါ အားလုံးကို မယူနိုင်သည့် အတွက်- ၃.၃၃ ဟူ၍ အနီးဆုံး ဒဿမ တန်ဘိုး ၂-နေရာကို ယူမည် ဆိုပါအံ့- ၄င်းကို ၃ ဖြင့် ပြန်မြှောက်ကြည့်သော အခါ မူလ အဖြေမှန် ဖြစ်သည့် ၁၀ ကို ပြန်ရတော့မည် မဟုတ်ပဲ- ၃ x ၃.၃၃ = ၉.၉၉ ဟူ၍ ဖြစ်လာပါ၏။ မူလ အဖြေ ၁၀ နှင့် ယှဉ်သော်- ၀.၀၁ ကွာသွားပါတော့၏။
ယင်းကဲ့သို့ ကိန်းဂဏန်းများ ဆင့်ပေါင်းခြင်း၊ မြှောက်ခြင်း၊ ထပ်ကိန်းများ လုပ်ယင်း- လုပ်ယင်း ဖြင့် ထိုကွာခြားမှု ပမာဏ သည် တစ်ဖြေးဖြေး ပို၍- ပို၍ ဟ သွား၏။ ဤသို့သော အမှားမျိုးကို- truncation error ဟု ခေါ်ပါ၏။ ထိုနည်းတူ အခြေခံ သင်္ချာကို လေ့လာဘူးသော သူတို့ အနေဖြင့် ပိုင် (pi) တန်ဘိုးသည် မပြတ်သော ကိန်း ဖြစ်သည့် 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510.. ဖြစ်သည်ကို သိသော်လည်း- အတွေ့အကြုံဖြင့် လက်တွေ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်လာကြသည့် လက်သမား ဆရာကြီးများ၊ ၀ပ်ရှော့ဆရာကြီး များသည် ပိုင် (pi) တန်ဘိုး အစား- ၃ နှင့်မြှောက်လိုက်၊ ၃- နှင့် စားလိုက် ဟူ၍ လက်တွေ့ သုံးစွဲကြ သည်ကိုလည်း ကိုယ်တွေ့ တွေ့ကြုံဘူးပါသည်။ သူသုံးလိုသော အနေအထား နှင့် သူသိထားသော အတိုင်း အတာနှင့် အလုပ်တော့ ဖြစ်နေသာ ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် အမှန် တကယ် တန်ဘိုး နှင့်တော့ ကွာသွားပြီ ဖြစ်ပါ၏။
သို့ဆိုလျှင်- အလင်းနှစ် သန်းပေါင်းများစွာဖြင့် တွက်ချက် ရသော - အထူး သဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံ အနေအထား ဖြင့် လှည့်ပါတ် သွားနေသော ဂြိုဟ်များ၊ (စက်ဝိုင်းဖြစ်သဖြင့်- (pi) တန်ဘိုး ပါလာသည်ကို သတိပြုပါရန်) truncation error များ မည်ရွေ့ မည်မျှ ဖြစ်လာနိုင်သနည်းကို မြင်နိုင်ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာ ပညာကို လေ့လာဘူးသူ တို့မှာ မူ- ထို error အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သင်ကြားဘူးကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ကွန်ပျူတာတွင် 16 bit, 32 bit, 64 bit စသည်ဖြင့် တိကျမှု အနေထားများ ကွာခြားသည်ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်၏။ ၄င်းတို့မှာ- ကွန်ပျူတာမှ ကိုင်တွယ် ဖြတ်တောက် နိုင်သည့် ဒဿမ ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်၏။ သာမာန် ကွန်ပျူတာ နှင့် စူပါ ကွန်ပျူတာတို့ ကွာခြားမှုသည်လည်း ဤအချက်ပင် ဖြစ်၍၊ Windows XP နှင့် Windows7တို့ကွာခြားခြင်းမှာလည်း ဤအချက်သည် အဓိက အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါ၏။
ဤသည်မှာ- truncation error ခေါ် ဒဿမ ဖြတ်တောက်မှုကြောင့် ကွာခြားမှု တစ်ချက်တည်း ဖြစ်သော်လည်း- ထိုထက်မက ထင်ရှားသည့် - တစ်နည်းအားဖြင့် ဖေါ်မြူလာကြောင့် ဖြစ်လာရသည့် error များလည်း များစွာရှိနေပါ၏။
ဆက်လက်၍ အောက်တွင် လေ့လာကြပါစို့။
သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်းအား လေ့လာခြင်း။
သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း -၏ နောက်ခံသမိုင်းကို ဦးစွာ လေ့လာဘို့ လိုပါသည်။
အဆိုများ အရ- သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း ၏ သက်တမ်းသည် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော် သက်တမ်း ရှိသော ကျမ်းစာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အိန္ဒိယတို့က ၄င်းတို့၏ ကျမ်းသည် အနှစ် ၅၀၀၀ ကျော် ရှိပြီဟုပင် ဆိုနေကြပါသည်။ နောက်ဆုံး အထောက်အထားများအရ- မက်ဆို ပိုတေးမီးယား ဒေသ၊ (ယခု အီရတ်နိုင်ငံ) တွင် ခရစ်တော် မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၃၅၀၀ မှ ၃၀၀၀ ခန့် (လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်) ကာလက တည်ရှိ ခဲ့သော ဆူးမေးရီးယန်း လူမျိုး (ဘေဘီလုံ ခေတ်ထက်ရှေးကျသော လူမျိုးစု) တို့၏ ကျောက်စာ တွင်- ကောင်းကင်မှ နက္ခတ် တာရာ တို့ကို တွက်ချက် မှုများကို တွေ့လာရပါသည်။ ထိုနည်းတူ မာယာ လူမျိုးတို့၏ ပြက္ခဒိန် တွင်လည်း ကောင်းကင် တွက်ချက်မှု များ ပါဝင် နေခဲ့သည်ကို တွေ့ကြရသည်။ နက္ခတ်တာရာ တွက်ချက်မှု ပညာရပ်တို့နှင့် ပါတ်သက်၍- အခြားသော တွေ့ရှိ မှုမှာ- ရှေးဟောင်း ဘေဘီလုံ ခေတ် ခရစ်တော် မပေါ်မီ ဘီစီ ၇၄၇ မှ ၇၃၃ ဘီစီ အထိ အုပ်ချုပ် ခဲ့သော နက်ဘိုနက်စာ အမည်ရှိ ဘုရင် လက်ထက်တွင်- လကြတ်ခြင်း၊ နေကြတ်ခြင်း ကို တွက်ထား ခဲ့သော အချက်အလက်များကို တွေ့ရပြန် ပါသေးသည်။
အမှန်အားဖြင့်- သိဒ္ဓန္တကျမ်းမျိုး (၁၈) မျိုး အထိ ကွဲပြား သွားသော်လည်း- အိန္ဒိယ တွင် ပေါ်ပေါက် လာခဲ့သော ပါရမီရှင် နက္ခတ်ပညာ ရှင်များ ဖြစ်သည့်- အရိယ ဘတ္တ နှင့် ၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာ တို့ မှ အောက်ပါ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း (၅) မျိုး ကိုသာ- ထောက်ခံ ခဲ့သည်။
၄င်းတို့မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
• ပေတ မဟာ သိဒ္ဓန္တ
• ရောမက သိဒ္ဓန္တ
• ပေါလိစ္စ သိဒ္ဓန္တ
• ၀ါစိဿ သိဒ္ဓန္တ
• သူရိယ သိဒ္ဓန္တ
၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသည် ထိုမူ ၅-မျိုးတွင် သူရိယ သိဒ္ဓန္တသည်သာ အတိအကျ ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပိုင်းဖြတ်ပေးနိုင်သူ ပညာရှင် ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယ ပြက္ခဒိန် ကျမ်းတို့အဆိုအရ- ခရစ်နှစ် ၆၂၈ တွင် ဗြဟ္မာ ရပ္မတိ အမည်ရှိသော နက္ခတ် ပညာရှင် ထံမှ ကူးယူ၍- ခရစ်နှစ် ၁၆၀၉ တွင် နက္ခတ် ပညာရှိ ဖြစ်သူ ရန်ဃ နာသ မှ ပြုပြင်သည် ဆိုထားပါသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၅၈-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် ဘုန်းတော်ကြီး အက်ဘင် နက်ဇာ ဘားဂက်စ် (Ebenezer Burgess) မှ- ၄င်းကျမ်းအား ခေတ်နှင့် လျော်ညီအောင် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားပါက Amazon မှ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၄င်းကို ခေတ်သစ် သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်းဟု ခေါ်၍၊ သချာင်္ ပညာရှင်များ အနေဖြင့် နားလည် နိုင်သော စာအုပ် ဖြစ်ပြီး၊ ယခု အိန္ဒိယ တနိုင်ငံလုံး တွင် အသုံးပြုနေပါသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာ အားဖြင့်မူ- သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း သည် ဗြဟ္မာ မှ ရေးသား စီရင်သည် ဟုပင် ဆိုထား ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ- ၄င်း၏ မူလ ပထမကို မူ မည်သူမျှ သေသေ ချာချာ မသိပါ။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၄၀-ခုနှစ်၊ (ခရဇ်နှစ် ၁၇၈၆) ဘိုးတော် မင်းတရား လက်ထက်တွင်၊ အိန္ဒိယပြည် ဗာရာဏသီ မြို.မှ နက္ခတ်ပညာရှင်- ဘ၀ါနိဒင် ဆိုသူသည် သက္ကတ ဘာသာ ဖြင့် ရေးသားထားသော သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း ကို မြန်မာပြည်သို့ စတင် သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ၄င်း ကျမ်းကို မောင်းထောင် ဆရာတော် ဘုရားမှ ဦးစွာ ဘာသာပြန် ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဘာသာ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး- အနှစ် ၅၀-ခန့် အကြာကာလ-မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၀၃- ခုနှစ်၊ တွင် နာဂရီ ဘာသာဖြင့် ရေးသား ထားသော အခြား သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း တစ်စောင် မြန်မာပြည်သို့ ထပ်မံ ရောက်လာ ခဲ့သည်။
ထိုနောက်မှ- ရောက်လာသော ကျမ်းကို ညောင်ကန် ဆရာတော် ဘုရားသည် မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၂၅- ခုနှစ် ခန့်တွင် မြန်မာဘာသာ သို့ ပြန်ဆိုပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက်- ထို ညောင်ကန် ဆရာတော် ဘာသာ ပြန်သော ကျမ်း နိသျှ အတိုင်း- ကို မြစ်စဉ် ၀န် ရွှေခဲယဉ်း လှေတော်အုပ် မှ ရှင်းလင်း ၍- လင်္ကာများ ရေးခဲ့ပြီး၊ နောက်တွင် နေမျိုး မင်းလှ ကျော်သူ မှ စကားပြေ အဖြစ် ပြန်လည် ရေးသားခဲ့သည်။ ယခု မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အများစု သိထားကြသော သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း သည် ညောင်ကန် ဆရာတော် ဘုရား၏ ကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ပညာရပ် တို့၏ မူရင်း၊ ကျမ်းမူရင်း ဆိုရာတွင်-အံ့မခန်း သော သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း တွင်ပင်- မူရင်း ဇစ်မြစ် ရှာရ ခက်ပါသည်။
ထို.ကြောင့် - “မိမိတွင် ရှိသော ကျမ်းသည်သာ-မူရင်းကျမ်းဖြစ်သည်၊ မိမိကျမ်းသည် သာ အစစ် အမှန် ဖြစ်သည်၊ မိမိ တတ်မြောက်ထားသည် က, သာ - အမှန်ဖြစ်သည်” ဟု သဘော မထားပဲ- ထိုကျမ်းကို မိမိ ကိုယ်တိုင် ဘယ်ရွေ. ဘယ်မျှ တတ်ကျွမ်း နားလည်သည် ကသာ အဓိက ကျပါသည်။ ထို.ကြောင့်လည်း မြတ်စွာ ဘုရား အနေဖြင့် ကာလာမ သုတ္တန် တွင်- “ငါဘုရား ပြော၍လည်း မှန်သည်ဟူ၍ မယုံနှင့်၊ ကျမ်းဂန်တွင် ပါသော ကြောင့်လည်း မှန်သည် ဟူ၍ မယုံနှင့်၊ ပညာရှိများ ပြော၍လည်း မှန်သည် ဟူ၍ မယုံနှင့် -” စသည်ဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် အမှန်ကို သိအောင် လုပ်စေရန်သာ ဟောကြား ခဲ့သည်ကို သတိပြုကြ စေလိုပါသည်။
သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း အား၊ ယခုခေတ် လူငယ်တို့ လိုက်စားမည် ဆိုပါက- မသိ နားမလည် သော အခေါ် အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများကြောင့်- လွန်စွာ အခက် အခဲတွေ. ရပါလိမ့်မည်။ နောက်ကွယ်က သင်္ချာသဘော ကို နားလည်ရန် ကမူ များစွာ ပို၍ ခက်ခဲ ပါလိမ့် မည်။ ထို့အပြင် မြန်မာမှု မပြုခင်က သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်းသည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဥဂျိန်း ဒေသ (မြန်မာ အခေါ် ဥဇ္ဇေနီ တိုင်းပြည်) ကို မူတည် တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ရာ- ယခု ကမ္ဘာသုံး စနစ်ဖြစ်သော ဂရင်းနစ်မှ တွက်ချက်မှု နှင့် ကွာခြားမှု ရှိပါသည်။
ယခု ဆောင်းပါးတွင် သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း မှ အရေးပါသော အချက်များနှင့် ခေတ်မီ သိပ္ပံ နက္ခတ္ထ ပညာ (Astronomy) တို့ တွင် ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာ ကဏ္ဍများကိုသာ ရေးသားမည် ဖြစ်ပြီး- သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း ကို တစ်ပိုဒ်ခြင်း၊ တစ်ဂါထာခြင်း ရှင်းမည် မဟုတ်ပါ။ ခေတ် အဆက်ဆက်တွင် ဘာသာပြန် ပြုစု သူတို့ အနေဖြင့်- ပညာရပ် ကို ဘာသာပြန် ခဲ့ကြရာတွင် အာကာသ နက္ခတ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့် အလိုက်၊ သင်္ချာပညာ ကျွမ်းကျင်မှု အလိုက်- အယူအဆပိုင်း ကွာခြားမှု တို့ကြောင့် ကွဲပြားလာသော ပြဿနာများကို စိစစ် တင်ပြမည် ဖြစ်ပြီး- ဤဆောင်းပါး ပါ သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း သည်- ညောင်ကန် ဆရာတော်ဘုရား၊ မောင်းထောင် ဆရာတော်ဘုရားတို့၏ ဘာသာပြန် ပြုစုတော်မူ ခဲ့မှုများကို မဆိုလိုပဲ- ထို့ထက် စောသော ခေတ်က-ပင် ကွာခြားလာခဲ့သော သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း အနေအထားများ ကိုသာ ရှင်းပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အလွန် ရှေးကျခဲ့သော ကာလများက- အိန္ဒိယတွင် သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်းပါ တွက်နည်း ဖေါ်မြူလာများကို မိဘမှ သားသမီး၊ ဆရာမှ အယုံကြည်ရဆုံး တစ်ပည့် ဆီသို့ အလွတ်ကျက် သောနည်းဖြင့်သာ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပြီး- ကျမ်းတစ်စောင် အဖြစ်ထုတ်ဝေ ခဲ့ခြင်းပင် မရှိခဲ့ပါချေ။ (ဤအကြောင်းကို မဟာဘာရတ္တ၊ မနုမိရိတိတွင်- ရှေးကျမ်း ပညာကို - ထိုပညာဖြင့် ငွေကြေး အမြတ်မထုတ်သည့် ယုံကြည်ထိုက်သူကိုသာ ပေးရမည် ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။)
ထို့ကြောင့်လည်း- ကျမ်းတစ်စောင် အဆင့်သို့ ရောက်လာသော အခါတွင်- ထိုဖေါ်မြူလာ တွက်နည်းများသည်- မူရင်းအတိုင်းအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် မည်သူမျှ မသိခဲ့ကြတော့ပါပေ။ ဤသည်မှာ သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း မြန်မာပြည် မရောက်ခင် နှစ်ပေါင်း များစွာက အနေအထားက ပင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်တော့- သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကို နားလည်ထားသည်က တစ်မျိုးဖြစ်၏။ ပြက္ခဒိန် တွက်နည်းများကို လေ့လာသူများ အနေဖြင့် မကာရန္တ နည်းက တစ်နည်း၊ သူရိယ သိဒ္ဓန္တ တစ်နည်း ဟု နားလည် ထားကြပါ၏။ အမှန်အားဖြင့်လည်း- မကာရန္တ နည်း သည်- မြန်မာပြည် မရောက်လာခဲ့သော ပဉ္စ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း ၅-ကျမ်းတွင် တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်သော “ပေါလိစ္စ သိဒ္ဓန္တ ကျမ်း” မှ နည်းပင် ဖြစ်၏။
သို့သော် ထိုနည်းကို အိန္ဒိယတွင် တန္တရ မူ အနေဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး- သာဝန ရက်ပေါင်း 1577917800 ကို မဟာယုဂ ဖြစ်သော နှစ်ပေါင်း (တနည်းအားဖြင့် စတုယုဂ်) ဟုခေါ်သော 4320000 နှင့် စား၍ ရလာသော ရက်ဖြစ်သည့် 1577917800/4320000=365.25875 ကို တစ်နှစ်တွင် ရှိသော ရက်အနေဖြင့် တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူရိယ သိဒ္ဓန္တ မူ အရ ဆိုသော်- နှစ်တစ်နှစ်တွင် သာဝန ရက်ပေါင်း 1577917828 ရှိသဖြင့်- တစ်နှစ်တွင် ရှိသော ရက်ပေါင်းမှာ 1577917828/4320000=365.25875648148148148148148148148 ဖြစ်၏။
ဤသည်မှာ sidereal year ခေါ် နက္ခတ် တစ်နှစ်တွင် ရှိသော သာဝန နေ့ပေါင်း ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၍- ယခုအရပ်သားများ သိသော solar Year ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်သည်ကို သတိပြုမိ စေလို ပါသည်။
ယခုခေတ် ခေတ်မီ နက္ခတ် ပညာများဖြင့် တိကျစွာ တွက်ချက် ထားချက်များ နှင့် သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ကို ယှဉ်ကြည့်မည် ဆိုပါလျှင်။
sidereal year ခေါ် နက္ခတ် နှစ်ကာလများကို နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။
(sidereal year ခေါ် နက္ခတ် နှစ် ဆိုသော အဓိပ္ပါယ်၊ Tropical year ခေါ် ဥတု နှစ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သိလိုပါက- http://en.wikipedia.org/wiki/Year တွင် လေ့လာကြစေလိုပါသည်။ လွန်စွာ ရှုပ်ထွေးသွားမည် ဆိုပါ၍ ဤဆောင်းပါးတွင် မဖေါ်ပြတော့ပါ။)
Actual Length ခေါ် ပကတိ အတိုင်းအတာ ပမာဏ အနေဖြင့်-
sidereal year (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ) = 365.258756 (အထက်တွင် ပြန်ကြည့်ပါ။)
sidereal year (Modern Astronomy) = 365.2564 (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ အနေဖြင့် ၃ မိနစ်၊ ၂၇ စက္ကန့်သာ ကွာခြားမှု ရှိသည်)
Average length ခေါ် တစ်နှစ် တာ၏ ပျမ်းမျှ အတိုင်းအတာ ကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်လည်း-
sidereal year (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ) = 365.2563627 (ပျမ်းမျှ တန်ဘိုး ဖြစ်သည်။)
sidereal year (Modern Astronomy) = 365.25636305 (အလွန်နီးစပ်သော တန်ဘိုးဖြစ်သည်။)
Tropical year (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ) = 365.2421756
Tropical year (Modern Astronomy) = 365.2421904 (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ အနေဖြင့် ၁.၄ စက္ကန့်သာ တိုတောင်းသည်။) အရပ်သုံး ဖြစ်သော solar Year အနေဖြင့်မူ 365.2425 ရက်ပေါင်း ရှိသည်။ 365.2425 ရလာပုံမှာ- ၄ နှစ် တစ်ကြိမ် ရက်ထပ်ခြင်း ဖြင့် တွက်ပါက 365.25 ဖြစ်သော်လည်း- အမှန်တကယ် ဖြစ်နေသော Tropical year တန်ဘိုး 365.2421904 နှင့် နီးစပ်စေရန် အတွက်- ဂရီဂိုရိရမ် ခရစ် သက္ကရာဇ် ကို ၄ နှင့် စား၍ ပြတ်သော်လည်း ၁၀၀ နှင့် စား၍ မပြတ်ပါက- ရက်ထပ်နှစ် အဖြစ်မယူပဲ- ၄၀၀ နှင့်ပါ စား၍ ပြတ်ပါမှသာ ရက်ထပ်နှစ် အဖြစ်ယူ ခြင်းဖြင့်- သက္ကရာဇ် ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀ တို့သည် ရက်ထပ်နှစ် ဖြစ်သော်လည်း- သက္ကရာဇ် ၁၇၀၀၊ ၁၈၀၀၊ ၁၉၀၀ တို့သည် ရက်ထပ်နှစ်များ မဟုတ်တော့ပဲ- တစ်နှစ်တာ အတိုင်းအတာ ပျမ်းမျှ တန်ဘိုးမှာ 365.2425 ဖြစ်သွားပြီး- Tropical year တန်ဘိုး 365.2421904 နှင့် နီးစပ်သွား စေခြင်း ဖြစ်သည်။ စကားချပ်)
ဤနေရာတွင် မတူညီသော တိုင်းတာမှု ၂-ခုဖြစ်သည့် ယခုခေတ် Modern Astronomy မှ တွက်ချက်သော Tropical year တန်ဘိုး 365.2421904 နှင့် sidereal year (သူရိယ သိဒ္ဓန္တ) တန်ဘိုး 365.258756 တို့ကို နှိုင်းယှဉ်၍ မရပါ။ တစ်ခုသည် Tropical year ၏ Average length ခေါ် တစ်နှစ် တာ၏ ပျမ်းမျှ တန်ဘိုး ဖြစ်နေပြီး၊ အခြား တစ်ခုသည် sidereal year ခေါ် နက္ခတ် နှစ်၏ Actual Length ခေါ် ပကတိ အတိုင်းအတာ ပမာဏ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (မြန်မာ ပြက္ခဒိန် နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်နေသူ ၀ါသနာရှင်များကို အကြံပြု ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
သူရိယ သိဒ္ဓန္တကျမ်း နှင့် Swiss Ephemeris တို့အား လေ...